Central Online News – Page 490
ရန်ကုန်အပူရှိန်မြင့်မားနေမှုကြောင့် YBS တပတ်ရစ်ကား အစီးရေ ၃ဝဝဝ ကျော် အဲကွန်းမနိုင်တော့ဟုဆို
ယခုလပိုင်း ရန်ကုန်မြို့၏အပူရှိန်မြင့်မားနေမှုကြောင့် YBS တပတ်ရစ်ကားအစီးရေ ၃ဝဝဝ ကျော်သည် အဲကွန်းများမနိုင်တော့ကြောင်း Power Eleven ကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးသက်တင်ဝင်းက ပြောသည်။ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြေးဆွဲနေသည့် YBS အစီးရေ ၆ဝဝဝ ကျော်အနက် အစီး ရေ ၂၈ဝဝ မှာ ကားသစ်များဖြစ်ပြီး Foton ကုမ္ပဏီ၊ Yutone […]
ဝါရင့်အနုပညာရှင်ကြီး ရှမ်းပြည်ဦးစောနိုင် (ခ) ဥူးဇင်း ဥူးစန္ဒီမာ ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူ
အနုပညာလောကရဲ့ ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ကျရာအခန်းကဏ္ဏကနေ အကောင်းဆုံးပံ့ပိုး သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူတွေထဲမှာ ရှမ်းပြည်ဦးစောနိုင်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်မြောက်တဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ဇာတ်ပို့မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေရဲ့ အခန်းတွေဟာလည်း အရေးကြီးဆုံးပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကရဲ့ ဇာတ်ပို့နေရာမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲကိုအရောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သူဟာ ရှမ်းပြည်ဦးစောနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးစောနိုင်ဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတာကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေကိုရပ်နားပြီး နယ်မြို့လေးမှာ ဥူးဇင်းဘဝနဲ့ တရားအားထုတ်မှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်ဦးစောနိုင်ရဲ့ […]
မြစ်ဆုံကိစ္စ အစိုးရချင်း တိတ်တိတ်လေး လက်မှတ်ထိုးတာမျိုး မလုပ်ဟုဆို
အာဏာရ NLD ပါတီအစိုးရ အနေဖြင့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိစ္စများတွင် ပြည်သူ လူထုကို အသိပေးခြင်းမပြုပဲ အစိုးရချင်း တိတ်တိတ်လေး လက်မှတ်ထိုးတာ မျိုး လုပ်ဆောင်သွားမည်မဟုတ်ဟု သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေး က ပြောကြားသည်။ထိုကိစ္စတွင် ပြည်သူလူထု၏သဘောထားများကို အလေးအနက်ထားသလို တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ထားရှိထားသည့် သဘောတူညီချက် ကတိကဝတ်များ အပေါ် အလေးထား လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုလည်း […]
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် ၁ နှစ်၊ ၉ လအရွယ်ကလေးငယ်အား ရေနှစ်နှိပ်စက်ခဲ့သည့် အဖွားနှင့်အဒေါ်တို့ အာမခံရရှိထားကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ အမျိုးသမီး ၂ ဦးက ကလေးတစ်ဦးအားရေနှစ်နှိပ်စက်နေသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်မှာ Facebook ပေါ်တွင် ဧပြီလ ၂၅ ရက်တွင်စတင်ပြန့်နှံ့လာပြီး လူစိတ်ဝင်စားမှုများပြားလာခဲ့သည်။အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့လယ်ပိုင်းတွင် အခင်းဖြစ်နေအိမ်၌ […]
ကောလင်း – ထီးချိုင့် ကား လမ်းဘေးတွင် ရွှေထွက်သည်ဆိုကာ ဒေသခံလူဦးရေ ထောင်ချီ လာရောက်တူးဖော်နေသဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရက လုံခြုံရေးချ၍ တားမြစ်ရ ပြီး မည်ကဲ့သို့ ဆက်လက်ဆောင် ရွက်မည်ကို ယနေ့ကျင်းပမည့် ပြည် ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ လေးလပတ်အ စည်းအဝေး၌ တင်ပြဆွေးနွေးမည် ဖြစ်သည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး […]
ကရင်ပြည်နယ် ကျက်သရေဆောင် ဆံတော်ရှင်ဇွဲကပင်တောင် ယနေ့ည တောင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား ဒီလောက်ကြီးကြီးမားမား တခါမှမတွေ့ဖူးဘူး မကြုံဖူးဘူး ဘာကြောင့်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေဖြစ်နေရလဲ? ဘာကြောင့်လဲ……? Credit-June Lay Photos-Saw Ag Soe Moe
ကျပ်သိန်း (၁၂၀) နဲ့မြန်မာမိန်းကလေးကိုတင်တောင်းပြီး လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသား အဖမ်းခံရ
သူတို့ကို လူကုန်ကူးမှု ဥပဒေနဲ့ ဖမ်းတာလို့ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့ က ရဲမှူးဝေလွင်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်က အဲဒီ မိန်းကလေးရဲ့ ဇာတိ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျိုက်လတ်မြို့နယ်၊ ဝါးကောက်ကျေးရွာအုပ်စုက ရွာမှာ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က ရန်ကုန်မှာ […]
” လူထွက်တော့မယ် အဖေရယ် အမေရယ်” ကလင်.……… ကလင် ဖုန်းခေါ်သံလေးကြားပြီးကိုင်လိုက်တော့ ဟဲလို ……… သမီးလား ဟုတ်တယ်အမေ သမီးဒီနှစ်ပြန်လာရင် လူထွက်တော့မယ် အဖေအမေ ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလေးရယ် အေးပါကွယ် အမေ့ဆီသီလရှင်ဝတ်ရဲ့လေးတော့ပြန်ခဲ့ပါကွယ်။ ဒေါ်တင်မေ တစ်ယောက်အတွေးများစွာနှင့်နေပြီးစဉ်းစားနေတော့တယ်။မွေးထားတဲ့သားသမီး ၃ ယောက်ထဲမှာ “သမီးသီလရှင်လေးကအကြီးဆုံး သားလေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူတကွနေတာပေါ့သမီးလေးကို ၁၀ နှစ်အရွယ်တည်းကသီလရှင်ဝတ်ပေးခဲ့ပြီး […]
ရဟတ်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ဖို့ ကုမ္ပဏီတခုက ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဆီ တင်ပြတယ်လို့ တိုင်းအစိုးရသတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဧပြီ ၂၅ ရက်က ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကို Eco World Developer Co., Ltd က တာဝန်ရှိသူတွေ လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး ရဟတ်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံလုပ်ငန်း […]
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစီးခဲ့သည့် Wolseley RC 2874ကားကို ၂၄၅ ရက်ကြာအချိန်ယူ၍အသေးစိတ်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း Htoo Auto Service မှရေးသားထားကိုတွေ့ ရသည်။ဖခင်ဖြစ်သူစီနင်းခဲ့သည့်ကားကို သမီးဖြစ်သူဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က ပြန်လည်မွမ်းမံပြီးစီးချင်သည့်အတွက် Htoo Auto Service ကအသေးစိတ်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး ပြန်လည်အသက်သွင်းလိုက်ခြင်းဟုလည်း သိရသည်။အဆိုပါကားကိုပြင်ဆင်ပြီးစီးပုံနှင့်ပတ်သက်၍ Lin Htet (EEM) အမည်ရ Facebook […]
« 1 … 489 490 491 … 509 »